लुम्बिनीमा कमजोर(एकीकृत समाजवादी) पार्टी : समानुपातिक सांसदले जोगाइदिइन् इज्जत - Abhiyan news
१६ भाद्र २०७८, बुधबार ०२:५३ अभियान न्यूजLeaveaComment on लुम्बिनीमा कमजोर(एकीकृत समाजवादी) पार्टी : समानुपातिक सांसदले जोगाइदिइन् इज्जत
लुम्बिनी प्रदेशसभामा माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कमजोर देखिएको छ । झण्डै शून्य अवस्थामा रहेको नेकपा (एस)लाई पाल्पाकी एक समानुपातिक सांसदले इज्जत जोगाइदिएकी छन् ।
प्रभावशासली नेता सबै एमालेमै रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशसभाकी एमाले सांसद रमा घर्ती मगरले मंगलबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङमा नेकपा (एस)मा सनाखत गरेकी हुन् । नेकपा एमाले विभाजन भई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि घर्तीले निर्वाचन कार्यालयमा गएर समाजवादी रोजेकी हुन् । उनी समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख मीनराज भट्टराईको रोहवरमा घर्तीको हस्ताक्षर सनाखत भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । घर्तीले एमालेका अरू केही सांसद पनि एकीकृत समाजवादीमा आउने दाबी गरेकी छन् । उनले आफ्नो दलको लुम्बिनीमा चार दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहने बताइन् ।
८० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा एमालेका ३७ जना सांसद थिए । घर्तीले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अब एमाले सांसदको संख्या ३६ मा झरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धसँग ४४ प्रदेशसभा सदस्य पुगेका छन् ।
मेवा मन पराउनु हुन्छ, फाइदा के के हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस !
नेपाली सेनामा जागिरकाे अवसर
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०३:०० अभियान न्यूज
६ बैशाख २०७९, मंगलवार ०२:५५ अभियान न्यूज